श्रीमान् हप्तामा ३ दिन जेठीसँग, ३ दिन कान्छीसँग र १ दिन छुट्टी बस्ने सम्झौतामा धाँ’ध’ली भएपछि… – ABC NEWS 24
श्रीमान् हप्तामा ३ दिन जेठीसँग, ३ दिन कान्छीसँग र १ दिन छुट्टी बस्ने सम्झौतामा धाँ’ध’ली भएपछि…
श्रीमान् हप्तामा ३ दिन जेठीसँग, ३ दिन कान्छीसँग र १ दिन छुट्टी बस्ने स’म्झौ’ता’मा धाँ’ध’ली भएपछि…
काठमाडौं। एउटी श्रीमती हुँदाहुँदै श्रीमानले अर्की श्रीमती ल्याएपछि दुई श्रीमतीले श्रीमानको बाँडफाँड गरे । तर यो बाँडफाँडमा धाँ’धली भएपछि त’ना’व भएको छ । भारतको झारखण्डमा भएको यो वि’वा’दमा एक श्रीमती पुलिस थाना पुगेकी छिन् । आज तकको समाचार अनुसार थाना पुग्ने श्रीमतीले सम्झौताको नियम उ’ल्लं’घ’न गरिएको आ’रो’प लगाएकी छिन् । उनले आफूले न्याय नपाउँदासम्म था’ना’बाट नफर्कने अडान लिएकी छिन् ।
घ’ट’ना झारखण्डको राँची शहरको हो । राजेश कुमार नामका एक व्यक्तिले श्रीमती हुँदाहुँदै अर्की महिलासँग स’म्ब’न्ध राखे । अर्की महिलासँग लामो समयसम्म लि’भ इ’न रि’ले’श’न’शि’प’मा पनि बसे । गएको डिसेम्बर ३१ का दिन उनले आफ्नी गर्लफ्रेण्डसँग बिहे गरे र उनलाई कान्छी बनाएर घरमा भित्र्याए । घरमा कान्छी ल्याएपछि जेठीले वि’रो’ध गरिन् । जेठीको वि’रो’ध’पछि कान्छी पुलिस था’ना पुगिन् । घरमा वि’वा’द भएपछि उनीहरु तीनैजना मि’लेर स’म्झौ’ता गरे ।
केही समयसम्म यही सम्झौताअनुसार सबै काम भयो तर अब सम्झौताको विषयमा वि’वा’द भएपछि कान्छी श्रीमती पुलिस था’ना पुगेकी छिन् । उनीहरुले स’म्झौ’ता’मा श्रीमान हप्तामा तीन दिन जेठी श्रीमतीसँग, तीन दिन कान्छी श्रीमतीसँग बस्ने सहमति गरेका थिए । श्रीमानलाई हप्तामा १ दिन विदा पनि दिइएको थियो । यो स’म्झौ’ता लिखित रुपमा भएको थियो । तर, जेठीसँग गएका राजेश नफर्किएपछि कान्छी पुलिस गु”हा’र्न पुगेकी छिन् । पुलिस यो विषयमा केही बोल्नबाट त”र्किंदै आएको छ ।
← गुडिरहेको बसभित्रै ब’ला’त्का’र ! त्यही बसमा यात्रा गरिरहेका ४५ यात्रुले कसरी थाहा पाएनन् ?
breaking news बामदेव रि’स, धेरैपछि यसरी ग’र्जि’ए, ओ’लीको नामै तोकेर यसो भनेपछि बा’लवुटारमा ठु’लो हं’गामा. भिडियो →